Serivisy - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co., Ltd.
Sebic dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana fiara elektrika, ary tapa-kevitra ny hanome anao ny serivisy tsara indrindra.
Ka ahoana no ahafantarantsika ny zavatra ilainao?
Voalohany, zahao ny vokatray ary safidio ny maodely tianao indrindra.
Avy eo,mitadiava fakan-kevitra momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny pejy ary apetraho ny zavatra takinao. Hifandray amin'ny ekipa R&D an'ny orinasa izahay ary hanome drafitra maromaro. IZA NO AZONAY ATAO HO ANAO! EBIKE, fanaingoana ny vokatra
Orinasa manompo mpivarotra sy mpivarotra ambongadiny izahay. Raha filàna manokana izany dia indraindray manokatra volam-bahoaka isika. Raha liana ianao dia miangavy mba hisoratra anarana ho mpikambana anay ary araho ny kaonty facebook anay.
Manana hevitra momba ny vokatra vaovao ve ianao?
Azontsika atao amin'ny orinasantsika ity
SORATRA SY FIANGONANA
Betsaka ny olona manontany hoe inona no serivisy sy fikojakojana ilaina hitondrana bisikileta Elektrika (eBike). Ireto misy fampahalalana fototra sy torohevitra ankapobeny mba hitazomana ny eBike ho toy ny nofy!
Tahaka ny tsingerina mahazatra rehetra, ny eBike-nao dia mila fikojakojana mahazatra; na izany aza aza esorina amin'ny ampahany elektrika an'io satria amin'ny ankapobeny dia mila fikolokoloana kely izany.
Betsaka ny tsy mpanafika no mino fa ny bisikileta elektrika dia tototry ny olan'ny fikojakojana, saingy tsy marina izany. Raha ianao, ilay mpampiasa, raiso ireo dingana fototra hitazomana ny bisikiletanao fa tsy mila mihoatra ny bisikileta mahazatra akory izany. Rehefa dinihina tokoa, raha toa ka mitsabo tsara ny eBikeo ianao dia hikarakara anao tsara ho setrin'izany.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia hanome lamina feno amin'ny bisikileta, izay zava-dehibe satria mila atsangana tsara ny eBike amin'ny voalohany mba hiasa tsara.
Ny mpivarotra sasany dia manolotra serivisy maimaimpoana hafa indray mandeha am-pandriana ao amin'ny eBike. Ilaina io ary ilaina ny manararaotra satria mety mila kilometatra vitsivitsy handefasana bolt vaovao, tariby mivelatra sns Amin'ny alàlan'ny famerenana azy aorian'ny fandriana ao vanim-potoana azonao atao ny manamafy azy rehetra, ary voamarina ny freins sy ny fitaovana sns. Fotoana tsara ihany koa io hanovana ilay lasely tsy dia mampahazo aina anao, apetraho amin'ny fomba hafa kely ny bara ary anaovy fanovana kely hafa mba hanomezana lalana mitaingina kokoa.
Fikojakojana ny eBike
Raha te hanana ny fiainana lava indrindra azo alaina avy amin'ny eBike dia afaka mandray dingana tsotra hitehirizana izany amin'ny tenanao ianao, tsy misy fitsangatsanganana mahazatra any amin'ny mpivarotra. Ireto misy torohevitra momba ny tsingerina ankapobeny hanampiana anao -
- Ataovy madio ny eBikeo. Raha azo atao dia diovy hatrany isaky ny mandeha mitaingina mpanadio bisikileta.
- Aza mampiasa fanasana jet na mitovy, satria io dia afaka mandroaka menaka manitra ny bearings, hasiany rano ao anatiny koa izay hanadio ireo singa ilaina.
- Raha mampiasa fantsona mahery vaika ianao dia mitandrema mba tsy hikororohana rano manakaiky ny hubs, bracket ambany, headset na amin'ny toerana hafa izay voahosotra matetika.
- Ny vokatra sasany mamirapiratra amin'ny bisikileta dia mety hamela sosona fiarovana amin'ny fandokoana, manampy amin'ny fitazonana ny eBike ho vaovao kokoa hatrany. Tandremo sao manakaiky an'io faritra io ny freins!
- Mampiasà menaka rojom-bolo mendrika hitazomana ny rojo nohosorana menaka aorian'ny fanadiovana azy, alao antoka fa tsy avela ho maina izy io. Lube mando amin'ny ririnina ary lube maina amin'ny fahavaratra. (Ny lemaka mando dia mando foana, maina ny maina lube).
- Azonao atao ny manondraka ireo tariby amin'ny menaka famafazana maivana, indrindra ny iray izay maina sy mamela sosona PTFE. Raha mampiasa lubricant izay mijanona ho mando ianao, dia afaka mifikitra amin'izany ny vovoka hivoahanao manaraka izay miteraka olana bebe kokoa ary mety hiteraka fakana tariby. (Miaraka amin'ny PTFE dia ho maina izy fa hamela sosona fanosotra).
- Rehefa tsy ampiasaina ny bisikileta dia andramo hitazona azy amin'ny toerana maina tsy ho an'ny singa.
- Tazomy tsara ny kodiarana. Izany dia hisorohana ny fitafiana kodiarana tsy mitovy. Hanamora ny fiainanao koa izany satria ny bisikileta dia hihodina miaraka tsy mahazaka fanoherana. Ho setrin'izay, tsy mandeha intsony ny motera ary mihitatra ny elanelam-potoana. Izany dia afaka manisy fahasamihafana bebe kokoa noho izay noeritreretinao. (Atao pirinty eo anilan'ny kodiaranao foana ny faneriterena.
Fikojakojana motera sy bateria
Ny ankamaroan'ny motera amin'izao fotoana izao dia voaisy tombo-kase na tsy misy serivisy, noho izany raha tsy nety izany dia hosoloina fa tsy namboarina, tsy dia misy fikojakojana eto.
Toy izany koa ny batterie; na izany aza azonao atao ny manao dingana hanitarana ny androm-batterinao. Ohatra ny mitazona azy io ho ambony, tsy avelany hivoaka mandritra ny fotoana maharitra, tsy avelany ao anaty hainandro migaingaina mandritra ny fotoana maharitra ary tsy avelako ao anaty hatsiaka mangatsiaka mandritra ny volana maro raha tsy ampiasaina. Ny ankamaroan'ny olan'ny bateria sendra ahy dia ny olona nanao ambanin-javatra ny bateriny, na nandao azy ireo nandritra ny taona maro sy taona maro talohan'ny niverenany tany aminy dia manantena azy ireo hiasa toy ny nataony fony vao vaovao!
Amin'ny ankamaroan'ny sela Lithium maoderina dia tsara kokoa ny mitazona hatrany ny bateria. Ka na dia mandeha bisikileta folo kilaometatra kely fotsiny aza ianao eny an-dàlana, dia mahasalama kokoa noho ny tampoka ny bateria aorian'io dia io fa tsy avelany hihazakazaka avy hatrany ary hiakatra avy hatrany.
Raha toa miharatsy ny bateria dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fivarotana eBike voatokana tsara ny fahaiza-manao. Lazao, ohatra, hoe lasa mangatsiaka be ny bateria na avelanao ao anaty trano heva mandritra ny fotoana maharitra izy io, afaka mandray soa avy amin'ny tsingerin'ny fametrahana feno. Ataovy mihazakazaka tanteraka ny bateria ary avereno ampidirina avy hatrany. Izany dia tokony hamerina hiverina amin'ny fanjakana ny bateria. Mety ho mendrika ny hanao azy indroa mba hahazoana antoka.
Ny fonosana bateria dia azo amboarina amin'ny sela maro ary indraindray ireo sela ireo dia lasa tsy mahay mandanjalanja. Batterie maoderina maro no mitazona ny tenany mandanjalanja tsara, miaraka amina sambo BMS, (Rafitra fitantanana bateria) na izany aza dia azo atao ny manome vola ireo sela tsirairay handanjalanjana azy rehetra. Ity dia tokony hataon'ny fivarotana eBike mendrika.
Olana elektrika, inona no hatao?
Raha sendra misy lesoka elektrika amin'ny eBike ianao dia tokony hifandray amin'ny mpivarotra nividiananao ny bisikileta. Tokony hiaina traikefa hanampy azy ireo izy ireo.
Raha tsy za-draharaha ianao, dia aza esorina lavitra ny elektrika. Aza esorina ny fonony plastika satria mety hanimba ny ao anaty ianao ary tsy hanamarina ny taratasy fiantohana; izany dia tokony hataon'ny teknisianina e-like.
Raha manapa-kevitra ny 'fiddle' ianao dia alao antoka fa manana lozika andriamby na fomba misy bolts sns ianao satria mety hianjera ny bitsika rehefa manokatra ny tranga ianao.
Tsara foana ny mametraka ampahany amin'ny filaharanao nanesorana azy ireo; amin'ity fomba ity dia hanana hevitra henjana ianao momba ny fiarahan'izy rehetra miverina.
Alohan'ny hiverenanao amin'ny mpivarotra dia azonao atao ny manamarina ireo mpampifandray elektrika: mety ho olana kely fotsiny izany. Lazao fa nahavoa tototra mafy ianao teny an-dalana ary tapaka ny herinaratra, zahao tsara ny bateria satria mety nihetsika kely teo amin'ilay mpampitohy izy io ka niteraka fahaverezan'ny fifandraisana vetivety.
Azonao atao koa ny maka antoka fa madio sy tsy misy harafesina ny fifandraisana rehetra.
EBike maoderina maro no manana diagnostika an-tsambo mba hilaza amin'ny mpivarotra izay mitranga raha misy ny olana. Ny rafi-pitantanana tsotra kokoa dia tranga fanesorana, izay hizaha toetra ny singa tsirairay mandra-pahafantatra ilay singa diso.
Indraindray dia tsotra toy ny famonoana sy famerenana ny eBike izany. Ny fanaovana izany dia hamerina ny mpanara-maso ary afaka mandeha indray ianao.
Mitandrema anefa, fa amin'ny famerenana azy io dia midika izany fa nisy olana ary tokony mbola hojeren'ny teknisianina iray amin'ny eBay ianao.
Ny eBike sasany dia azo atokisana kokoa noho ny hafa ary indraindray tsy mahomby ianao; ataovy izay azonao atao hijerena ny hambom-ponao sy ny hafalianao, ary hankafy ny fifaliana mandritra ny taona maro ianao.
Raha tsorina dia hoe: Ny eBike dia tsy tokony hitaky fikolokoloana bebe kokoa noho ny bisikileta fanosehana mahazatra, raha mbola raisinao tsara ihany.
Miaraka amina fomba maro, maodely ary elanelam-bidy, ny fividianana bisikileta elektrika (eike) dia mety ho dingana mampatahotra.
Mba hanampiana anao amin'ny fikarohanao dia nanamboatra torolàlana henjana aho hanampiana anao handray fanapahan-kevitra hoe iza no mety indrindra aminao. Ity no torolàlana ho an'ny mpividy bisikileta elektrika ..
Raha tokony ho be loatra amin'ny antsipiriany loatra aminao, ireto teny manaraka ireto dia 'Jargon Free' ary tokony hisy dikany na dia ireo vao mandehandeha indrindra aza dia torolàlana tsotra handrakofana ireo zava-dehibe.
Betsaka ny zavatra tokony hotadiavina ka efa nozaraiko ho dingana maromaro:
Fomban'ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra
Safidio ny fomba mety amin'ny eBike hanohanana ny fombanao mitaingina.
Ny tsena eBike dia nitombo be tao anatin'izay taona vitsy lasa izay ary miaraka aminy ny fomba, endrika ary tanjona maro samihafa.
Manomboka amin'ny bisikileta kely miforitra amin'ny kodiarana ka hatrany amin'ny mpandeha kodiarana lehibe; misy isaky ny fomba e-book tadiavin'ny mpampiasa farany.
Raha te-hahazo ny eBay tsara dia tsy maintsy mieritreritra tsara momba izay ilainao sy antenainao ianao:
- Raha mitady eBike kely ianao hiraikitra ao ambadiky ny fiara dia ejika mihorona no valiny.
- Raha mandeha miasa ianao dia zahao ireo efi-tanàna / mpandeha lavitra any.
- Ho an'ireo mpandeha an-dalambe natokana dia misy karazana eMTB isan-karazany.
- Fandehanana miasa mandritra ny herinandro, nefa aorian'ny fivoahana kely ihany amin'ny faran'ny herinandro? E-book hybrid iray no ho eo amin'ny lalànanao (sy ny lalan-kaleha).
- Betsaka ny karazana akany hita; manomboka amin'ny eTrikes ka hatramin'ny masinina hazakazaka feno karbaona
- Aza hadino ny mandray ny fomba sy ny fahaiza-miasa rehefa mitady ny eBike-nao: Na dia mety ho toy ny safidy azo ampiharina aza ny e-mail mihetsiketsika, raha mikasa ny hanao jaunts lava miaraka amina faritra ivelan'ny arabe ianao dia mety tsy hifanaraka amin'ny filanao mitaingina izany. Angamba jereo ao anaty fitoeram-piarakodia mety.
Ny filan'ny mpampiasa
Amin'ny farany, na inona na inona eBike nofidinao dia mila mifanaraka amin'ny ilainao. Tsy maintsy mieritreritra momba ny zavatra azo ampiharina eo amin'ny samy hafa ny eBikes ianao.
Ohatra: mety mifantoka amin'ny bisikileta kely miforitra amin'ny kodiarana ianao hiditra ao ambadiky ny fiara, fa aza manilika ireo e-bisikileta tsy misy mivalona lehibe kokoa; ny fampirimana dia mety azo ampiharina hamoritra sy hitahiry, fa raha tsy azo ampiharina amin'ny fombanao mitaingina ny ebike dia mety tsy dia hitondra azy intsony ianao, ary amin'ny faran'ny andro ny dia no zava-dehibe indrindra.
Ny mpanjifa rehetra hitako dia samy manana ny filany. Ny sasany mety tsy dia mailaka loatra ary mila tsingerina izay milamina sy mora idirana ary mivoaka. Amin'ity tranga ity dia bisikileta mitete izay mamela fahatokisana bebe kokoa rehefa mandeha bisikileta, ary raha misy fijanonana tampoka dia mamela anao hidina soa aman-tsara ny tongotrao, dia io no safidy mety. Aza mijery ny bisikileta ary mieritrereta hoe 'Toa bisikileta vehivavy io', zahao izany ary eritrereto hoe hahomby amin'ny inona izany aminao.
Ireo no zavatra farany azonao ampiasaina amin'ny fitsapana rehefa mizaha ny bisikileta (zavatra horesahintsika ato aoriana ao amin'ny lahatsoratra) fa tena mendrika hodinihina na dia eo am-piandohan'ny fisafidianana ny eBikeo aza.
Mifandray akaiky amin'ireo teboka etsy ambony ary ilaina amin'ny fisafidianana ny eBike mety; ny fiantohana fa manana ny haben'ny kodiarana ianao ary hiantoka ny fahombiazany sy ny fahafinaretana amin'ny faritra mitovy.
Tokony hanana hevitra tsara ianao hoe inona ny fomban'ny eBike anananao ankehitriny, fa inona ny fahasamihafana amin'ny haben'ny kodiarana ary inona ny fampiharana samihafa ananany?
Ankehitriny dia mety ho somary aloha kokoa hamaritana ny habeny fa tiako ny manamarika izany ankehitriny satria ny habe dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomban'ny eBike tadiavinao koa mividy. Ny tena habe dia tokony ho iray amin'ireo zavatra farany jerena fa; Miresaka amina olona marobe aho fa rehefa avy niresaka momba ny eBay dia minitra vitsy monja dia manontany - "Inona ny habeny ilaiko?".
Amin'io fotoana io dia tsy dia zava-dehibe loatra ny habeny fa tokony hoheverinao ny haben'ny kodiarana misy. Tamin'ny andro taloha dia nisy haben'ny kodiarana iray na roa fotsiny. Saingy ankehitriny rehefa nandroso ny tsena dia misy habe maro samihafa azo isafidianana.
Hifantoka amin'ny vitsivitsy fotsiny aho fa tsy hiresaka antsipiriany loatra.
700c: Ity kodiarana lehibe ity dia matetika ampiasaina amin'ny asan'ny arabe. Ny savaivony lehibe kokoa dia mandrakotra ny halavirana bebe kokoa rehefa mihodina amin'ny revolisiona iray manontolo noho ny kodiarana kely kokoa.
700c koa dia aseho amin'ny bisikileta trekking / hybrid marobe satria izy ireo dia azo ampiasaina na amin'ny làlambe na an-dalambe, ary ny tena maha samy hafa azy dia ny safidin'ny kodiarana: ny kodiarana hybrid dia hanana vatana somary malalaka kokoa noho ny kodiarana feno arabe, miaraka amin'ny haben'ny dian-tongotra sy lamina mifanaraka amin'ny fomba mitaingina.
29 "eMTB misy kodiarana (na 29ers) dia nanjary mahazatra kokoa, mamela ny fahaiza-manao sy ny fampiononana ho an'ireo mpampiasa eny ivelany.
26 ": habe malaza iray hafa dia ny kodiarana 26". Ampiasaina matetika amin'ny bisikilety an-tendrombohitra, kely kokoa ity kodiarana ity nefa mamela fifehezana bebe kokoa sy fihenan'ny kodiarana eny ivelan'ny lalana noho ny zokiny lehibe.
Izy ireo amin'ny ankapobeny dia misy kodiarana knobbier midadasika kokoa ho an'ny tanjaka sy ny fangejana amin'ny toe-javatra manjavozavo. Izany dia nilaza fa fahita matetika kokoa amin'izao fotoana izao ny mpanamboatra mampiasa kodiarana 26 "amin'ny bisikileta tanàna / komuter miaraka amin'ny kodiarana làlan'ny arabe sy ny faneren'ny kodiarana avo kokoa. Io dia ahafahan'ny eBike hahay hivezivezy amin'ny familiana maivana kokoa nefa tsy hanimba ny fanoherana mihodina amin'ny kodiarana lehibe eny an-dalana. Izy io ihany koa no mampihena ny afovoan'ny hery misintona ihany koa amin'izay mety ho mety kokoa amin'ireo mpampiasa fohy kokoa.
20 ": Ho hitanao ireo amin'ny bisikileta mivalona maro, izay manampy ny kodiarana kely hitazona ny haben'ny ankapobeny.
Tsara ny mitadidy fa raha kely kokoa ny haben'ny kodiarana, dia tsy dia lavitra ny halaviran'ny revolisiona iray, izay mety hahatonga ny asa mafy amin'ny dia lava kokoa.
Betsaka ny haben'ny kodiarana hafa, fa ireo no fahita indrindra amin'ny tontolon'ny eBike.
Aiza no hametrahana ny teti-bolanao?
Ny teti-bolanao dia singa lehibe iray amin'ny fanjaranao ny eBike. Miaraka amin'ny vidiny mora mahatratra an'arivony maro, tokony ho vonona ianao handoa vola kely kokoa ho an'ny eikeike noho ny bisikileta pedal mahazatra.
Ny bisikileta elektrika dia mety handoa vola hatramin'ny £ 10,000 + fa raha ny zava-misy dia manomboka amin'ny £ 800 ny ankamaroany ary manodidina ny £ 6000.
Ny teknolojia fanampiny ao amin'ny motera sy bateria dia mitaky fihenam-bidy fanampiny amin'ny vidin'ny bisikileta mahazatra.
Ny tsara dia rehefa mandroso ny teknolojia ary mihena ny vidin'ny base, ho hitanao fa afaka mandray milina azo antoka ianao amin'ny vola somary maotina.
Toy ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mandoa izay azonao ianao, ary ho an'ny eBikes dia midika izany fa mandoa bebe kokoa amin'ny kalitao, ny elanelam-potoana ary ny fahamendrehana.
Mazava ho azy fa aza mandoa vola bebe kokoa amin'ny zavatra tsy ilainao; mora ny entin'ny fitadiavana. Mifaninana izaitsizy ny tsena eBike; raha lafo kokoa ny iray noho ny iray hafa dia ara-dalàna ny antony. Raha entina eny an-tsena ny e-book iray izay lafo loatra dia ho hita eo izany ary ho sarotra amin'ny mpanamboatra ny mivarotra.
Miomàna hiovaova kely ny teti-bolanao, raha toa ka somary mihoatra ny teti-bolanao ny eBike iray manokana fa ny tena zava-misy dia hanao asa tsara kokoa amin'ny fanaovana izay tianao atao dia aza manilika azy.
Ny fampiasana ny fahafoizan-tena sy ny asany noho ny teti-bola dia mety hiafara amin'ny fandaniana lavitra kokoa amin'ny fanamboarana sy fanoloana.
Jereo manodidina ary ampitahao amin'ny ebay isan-karazany ny eBikes alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny teti-bola farany. Aza manilika na inona na inona. Mahaiza mandanjalanja.
Tadidio fa azonao ny vola aloanao, fa aza amidy amin'ny fiasa mahafinaritra ho azy.
Zava-dehibe ny fitaovana ary miverina amin'ny teti-bola ankapobeny ihany koa izany. Mety nametraka sary tao an-tsainao ianao ohatra hoe hoe £ 2000 fotsiny, ianao izao dia mety nahita ilay bisikileta antenainao ho azo. Fa ny fampiasa amin'ny kojakoja toy ny fiarovan-doha, fonon-tànana, akanjo miaro, kitapo, kiraro sns. Ireo zavatra ireo dia mety hitombo haingana!
Zava-dehibe koa ny fampidirana ireo singa toy ny fotaka, jiro, fitoeram-baravarana, hidy sns Mety ho hitanao raha toa ka mila bisikileta mandeha ohatra ianao, ny maodely sasany dia mety efa tonga miaraka amin'ny sombin-kazo toy ny fotaka, ny jiro ary ny talantalana namboarina ho fenitra. Mety izany, satria nisafidy tsara ireo singa tsara indrindra ho an'ny bisikileta sy ny asa eny am-pelatanana ny mpanamboatra. Mety ho tsara kokoa noho izy ireo matetika izy ireo noho ny singa ao amin'ny tsena aorina amin'ny daty manaraka, mety ho mora kokoa ihany koa ny mividy bisikileta mifamatotra amin'ireo faritra ireo.
Ny torohevitro dia ny fametrahana teti-bola roa, ny iray ho an'ny bisikileta ary ny iray hafa ho an'ny kojakoja, amin'ity fomba ity dia tsy mahafoy zavatra ianao na amin'ny lafiny roa. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy maintsy atao ohatra ny fiarovan-doha. Nefa tadidio ny sasany amin'ireo singa azonao vidiana na havaozina aorina amin'ny daty manaraka, avelao ny teti-bolanao ho mora volavolaina amin'izao fotoana izao. Rehefa manao izany ianao dia misoroka ny fividianana zavatra mety tsy ilainao ary rehefa mandeha ny fotoana dia ho tsapanao ny sasany amin'ireo zavatra tena ilaina tadiavinao.
Karazan-motera, haben'ny bateria & haavo
Tsy handinika lalina ireo karazana bateria sy maotera hafa aho satria horesahina amin'ny lahatsoratra iray hafa io; Na izany aza, azo antoka fa zavatra jerena rehefa mividy bisikileta elektrika.
Misy karazana motera roa lehibe eny an-tsena: Hub drive sy crank drive, ary miasa amin'ny fomba samihafa izy ireo.
Hub drive dia motera iray napetraka eo amin'ny kodiarana aloha na aoriana. Rehefa manitsakitsaka ny mpampiasa ny takelaka fanaraha-maso dia mampihatra herinaratra avy amin'ny bateria. Ity indray dia hanosika ny mpampiasa hiala amin'ny kodiarana aoriana na hisarika anao hiala amin'ny kodia eo aloha. Ny mahatsara an'ity rafitra ity dia ny itondranao motera mahery vaika kokoa hifanaraka amin'ny fombanao mitaingina. Azonao atao ny miova amin'ny ankapobeny ny motera hiara-miasa amin'ireo mpanara-maso sy bateria samihafa, noho izany dia misy zavatra maro amin'ny asany.
Crank drive no ipetrahana mivantana ny maotera ao anaty vatan-kazo ary atosika eo amin'ilay rojo ihany. Ity rafitra ity dia mandaitra kokoa satria ny mpampiasa dia mandaitra foana eo amin'ny fitaovana tonga lafatra miaraka amin'ny motera rehefa mandeha am-pandehanana ary amin'ny ankapobeny dia mila batterie kely kokoa hiasa.
Rehefa miakatra eo afovoan'ny môtô ny môtô dia tsy hiteraka vesatra mavesatra ny vodiny na ny any aoriana. Tombony iray hafa dia ny fahafahany manao tsara kokoa amin'ny toe-javatra malama, satria tsy dia misy vintana mihodina intsony rehefa ampiharina ny herinaratra. Tsy dia misy loatra ny "surging" ary ampiharina milamina kokoa ny torque amin'ny alàlan'ny elanelam-potoana.
Mety ho lasa antony lehibe ny teti-bolanao rehefa mandinika izay karazana fiara tokony haleha ianao. Ny bisikileta entin'ny crank dia mazàna lafo kokoa noho ny safidy atosiky ny hub, na dia misy aza ny motera crank drive vaovao tonga eny an-tsena amin'ny fotoana rehetra ary hitako fa misy bisikileta fitateram-bola misy teti-bola bebe kokoa izao. Raha ny fahamendrehana no fanalahidy; avy eo angamba mandeha miaraka amin'ny zavatra efa notsapaina sy notsapaina teny an-tsena nandritra ny fotoana kelikely. Ho ahy manokana dia mivarotra bisikileta crank drive fotsiny aho, iray amin'ireo rafitra azo itokisana indrindra eny an-tsena izy ireo, raha ny fahitako azy dia aleoko ny fomba tsapan'izy ireo rehefa ampiasaina, fiara voajanahary kokoa io ary tsy dia mihetsika loatra ary mino aho fa mahavita be aleo na dia ny tampon-kavoana aza.
Ny filanao tsara indrindra dia ny manandrana ireo rafitra roa ary jereo ho anao, izay iray mahomby kokoa noho ny zavatra takinao. Aza adino ny mitsapa ny bisikileta elektrika amin'ny havoana sarotra!
Raha ny batterie dia ity angamba no ampahany mandroso haingana indrindra amin'ny eike, miaraka amin'ireo teknolojia bateria vaovao tonga amin'ny tsena matetika. Misy karazany maro, ny malaza indrindra dia ny sela lithium. Izy ireo dia maivana kokoa noho ny batterie Ni-cad taloha, ary matetika maharitra mandritra ny fotoana lava kokoa.
Ity indray dia lohahevitra iray hafa miaraka ary hazavaina amin'ny antsipiriany amin'ny lahatsoratra iray hafa.
Arakaraky ny haben'ny haben'ny batterie no ahatonga azy.
Mahaiza mandanjalanja momba ny kilaometatra firy ho azonao, satria rehefa miakatra ianao dia mavesatra sy mihabe ny bateria. Tadidio fa ianao mpitaingina moto dia hitondra ity lanja fanampiny ity. Indraindray dia miresaka amin'ireo mpanjifa maniry ny 'bateria lehibe kokoa' aho satria amin'ny taratasy ny fahaiza-manao lehibe kokoa dia tsara kokoa. Na izany aza, rehefa manontany aho - “Raha ny tena izy dia kilometatra firy no ataonao?” Matetika dia tsy 50% akory ny isan'ireo bateria. Izany dia nilaza fa mahafinaritra foana ny be sisa tavela ao amin'ny batery rehefa mandeha mitaingina fiara ianao ka hanana fiadanan-tsaina fa tsy havela ho fohy ianao.
Ny torohevitro dia izao: Aza afangaro ny tenanao amin'ny famakiana be loatra momba ireo karazana maotera sy bateria samihafa, ny zava-dehibe tadiavinao dia ny fandidiana sy ny elanelany. Mandehana ary mandehana amin'ny fomba vitsivitsy, fantaro ny isan-karazany ary mandehana amin'izay mifanaraka aminao indrindra.
Izao no ampahany mahafinaritra! Io koa no ampahany lehibe indrindra amin'ny rehetra.
Tsy maintsy, manantitrantitra aho fa TSY MAINTSY handeha ary manandrana e-mail vitsivitsy hafa alohan'ny hanapahanao hevitra. Rehefa dinihina tokoa, raha tsy manandrana azy ireo ianao dia tsy ho fantatrao ny fihetsem-po sy ny fiasan'izy ireo.
Miaraka amin'ny karazany maro karazana eto dia manandrana vitsivitsy, tsy iray na roa, fa kely ny hahazoana fampitahana tsara. Raha tsy manandrana maromaro ianao dia mety tsy hahita ilay tonga lafatra ho anao.
Rehefa mitaingina fitsapana:
- Andramo amin'ny fitaovana samihafa sy amin'ny ambaratongam-panampiana samihafa ny eBike (raha misy safidy io), ary amin'ny fangaro maro araka izay azo atao mba hahafahanao mahatsapa tsara ilay bisikileta.
- Tsy tsara ny mitaingina sy midina amin'ny arabe hahazoana fanapahan-kevitra. Miakara havoana goavambe mandro, mihoatra ny bondrona, mivoaha ary mivoaha imbetsaka, raiso, tsapao ny lanjany, andramo ny paosinao, frein sns.
- Omeo fanandramana tsara amin'ny ankapobeny izy io hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra antenainao.
- Andramo ny iray izay ambanin'ny teti-bolanao ary ny iray hafa mihoatra ny teti-bolanao mba hahitanao izay azonao amin'ny volanao. Mety ho hitanao fa ny iray mora vidy dia mifanaraka amin'izay ilainao, na mety hahita ilay malala ianao hanohana anao tsaratsara kokoa amin'ny androm-piainany manontolo.
Izany dia hanome anao fotoana hiresahana amin'ireo mpivarotra; hianaranao bebe kokoa amin'ity fomba ity noho ny famakiana ny tenanao toy ny fanaon'ny mpivarotra isan'andro isan'andro. Ny mpivarotra rehetra dia hiteny hoe ny eBike no tsara indrindra, saingy tokony ho afaka hitarika anao bebe kokoa izy ireo ary hanondro ireo fiasa izay mety tsy hitanao tamin'ny taratasy. Noho izany antony izany dia mankanesa any amin'ny mpivarotra roa samy hafa ary fantaro ao an-tsainao ny eBike mety aminao.
Tohano sy miverina
Ny fanohanana sy ny fanohanana dia ilaina amin'ny fividiananao. Mampiverina antsika mitsidika mpivarotra isan-karazany koa izany mba handrefesana izay heverinao fa hikarakara anao any aoriana. Tsy tsara ny mividy eBike vaovao raha toa ka mandroso olana ianao ary tsy manana tohana.
Samy hafa ny antoka omen'ny mpanamboatra; ny hevi-dehibe dia ny mividy zavatra izay misy karazana antoka raha sendra olana. Hahita fiantohana misimisy momba ny faritra elektrika ao amin'ny eBike ianao, ary ny frame sy ny singa. Ireo dia miovaova fa amin'ny ankapobeny dia hahita antoka 2 taona amin'ny herinaratra ianao, ary 5 taona na koa fiantohana mandritra ny androm-piainana eo amin'ny frame sns.
Hamarino tsara fa mamaky ny pirinty kely ianao: Ny antoka ataon'ny mpanamboatra "lesoka amin'ny fitaovana" dia hafa tanteraka amin'ny "garant quibble".
Azafady mba fantaro fa ny batterie dia mety manana garantie famaritana fotoana miaraka amin'ny fiantohana tsingerina fiampangana. Ohatra, mety ho 6 volana fotsiny izy io fa raha nandrakotra tsingerin'ny fiampangana bebe kokoa noho ny voalaza ao amin'ny fiantohana dia tsy azo ekena izany.
Mitandrema amin'ireo mpanamboatra manome antoka voafetra na voafetra, ity lakolosy fanairana ity dia tsy mino ny fahatokisan'ny vokatra azy ireo.
Saika ny antoka rehetra dia voafetra satria, amin'ny faran'ny andro, ny eike dia ampahany mihetsika; Ireo bitsika dia hitafy fotoana ary ny bateria dia afaka mamaha ny fahaizany.
Ny torohevitro dia ny hividy avy any amin'izay azonao iverenana raha misy ny olana, miaraka amin'ny efitrano fampirantiana ara-batana azonao tsidihina manokana fa tsy miantso telefaona maro ary mikorontana amin'ny fonosana ilay bisikileta ary averina aterina. Jereo angamba ireo toerana izay afaka manompo ny bisikiletanao mba hitazomana hatrany hatrany amin'ny fotoana maharitra.
Serivisy sy fikojakojana -
Mazava ho azy fa mila fikolokoloana mahazatra ny eBike rehetra, na izany aza aza esorina amin'ny ampahany elektrika izany satria tsy mila fikojakojana kely izany amin'ny ankapobeny.
Betsaka ny tsy mpanafika no mino fa bisikileta elektrika iray dia tototry ny olan'ny fikojakojana saingy tsy marina izany. Raha toa ianao ka mampiasa ny dingana voalohany hitehirizana ny bisikiletanao, dia tsy mila mihoatra ny bisikileta mahazatra intsony izany. Rehefa dinihina tokoa, raha toa ka mitsabo tsara ny eBikeo ianao dia hikarakara anao tsara ho setrin'izany.
Na izany aza, ny fototr'izany dia ny fitazonana ny fahadiovan'ny bisikileta. Hamarino tsara fa tsy misy harafesina ny fifandraisana elektrika rehetra. Ilaina ihany koa ny manompo ny bisikileta iray manontolo ary rehefa mila izany izy ary mitazona ny rakitsoratry ny serivisy (Hanampy izany raha toa ianao ka mivarotra nyikeike lavitra kokoa).
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia hanome lamina feno amin'ny bisikileta, izay zava-dehibe, satria ny eBike dia mila atsangana tsara amin'ny voalohany mba hiasa tsara.
Ny ankamaroan'ny motera amin'izao fotoana izao dia voaisy tombo-kase na tsy misy serivisy, noho izany raha tsy nety izany dia hosoloina fa tsy namboarina, ka tena kely ny fikojakojana eto.
Raha tsorina, ny eBike dia tena mila mitaky fikolokoloana bebe kokoa noho ny bisikileta fanosehana mahazatra raha mbola ianao - tsara ny fandraisan'ny mpampiasa azy.